သတိပြုရမယ့် အရှေ့ဖက်က ခိုးတူးရန် ( စက်ပစ္စည်း အပြည့်အစုံ နဲ့ခိုးတူးတာတောင် လူမမိပါဘူးတဲ့ ဗျာ ) – Na Pann San
တရုတ် ကတော့ပေါ် တ င်ပဲ မြန်မာ ပိုင်နက် ထဲ က ချီဗွေမြို့နယ်၊ ကန်းဖန့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလူးခကျေးရွာနားမှာ သလင်းကျောက်ကိုတရားမဝင်လာတူးနေတာများမသိရင် တရားဝင် တူးနေ သလား မှတ် ရ တယ်၊ စက်ယန္တယား အစုံ နဲ့ ပြည်နယ် အစိုးရ ၊ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့ နယ်လုံဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင်ဆင်း ဖမ်းတာ၊ လူမမိဘူး ၊လစ်ပြေး ကုန်ပြီ….
သတိပြုရမယ့် အရှေ့ဖက်က ခိုးတူးရန်
တစ်ကယ်တော့ ချီဗွေမှာနယ်ခြားစောင့်တပ် အမှတ်(၁၀၀၁)ကဝေါ်ချုံးဒေသ၊ ဖီမော်ကျေးရွာနားမှာနဲ့ အမှတ်(၁၀၀၃)က ကန်ပိုက်တီးနားကဂမ်ခွန်းကျေးရွာမှာရှိတယ်၊ သူတို့ကိုကျော် ပြီး ဒီအထဲဘယ်လိုရောက်လာသ လည်းအတော်စဉ်းစား ရ ခ က် တယ် ၊
ကျနော်တို့မြန်မာတွေ အနောက်ဘက် ကိုကြည့်ပြီး တစ်လက်မမှ အပါ မခံနိုင်ဘူးကွ လို့ကြွေးကြော်နေတုန်း အရှေ့ဘက် ၊မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ကရှိသမျှ စိတ်ကြိုက်တူးဆွ ၊ယူကြလို့ကုန် နေပြီ ။
တရုတျကတော့ပျေါတငျပဲ မွနျမာပိုငျနကျထဲ က ခြီဗှမွေို့နယျ၊ ကနျးဖနျ့ကြေးရှာအုပျစု၊ ခလူးခကြေးရှာနားမှာ သလငျးကြောကျကိုတရားမဝငျလာတူးနတောမြားမသိရငျ တရားဝငျတူးနသေလားမှတျရတယျ၊စကျယန်တယားအစုံနဲ့ ပွညျနယျအစိုးရ ၊ သတ်တုတှငျးဝနျကွီးဌာနနဲ့နယျလုံဝနျကွီး ကိုယျတိုငျဆငျး ဖမျးတာ၊ လူမမိဘူး ၊လဈပွေးကုနျပွီ….
တဈကယျတော့ ခြီဗှမှောနယျခွားစောငျ့တပျ အမှတျ(၁၀၀၁)ကဝျေါခြုံးဒသေ၊ ဖီမျောကြေးရှာနားမှာနဲ့ အမှတျ(၁၀၀၃)က ကနျပိုကျတီးနားကဂမျခှနျးကြေးရှာမှာရှိတယျ၊ သူတို့ကိုကြျော ပွီး ဒီအထဲဘယျလိုရောကျလာသ လညျးအတျောစဉျးစား ရခကျတယျ ၊
ကနြျောတို့မွနျမာတှအေနောကျဘကျကိုကွညျ့ပွီး တဈလကျမမှအပါမခံနိုငျဘူးကှလို့ကွှေးကွျောနတေုနျး အရှဘေ့ကျ၊မွောကျဘကျနဲ့အရှမွေ့ောကျဘကျကရှိသမြှ စိတျကွိုကျတူးဆှ ၊ယူကွလို့ကုနျနပွေီ ။
တရားမဝင် ကျွန်းသစ်များ တင်ဆောင်လာသည့် ကား ( ၁၃ ) စီး ကို ယာဉ်မောင်း (၁) ဦး နှင့် အတူ ဖမ်းမိ
၁၅-၅-၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ည ၈:၀၀ နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု မှုနှင့် ပတ်သက် ၍ သတင်းထု တ်ပြန်ခြင်း
မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်တာပါ … ဇနီးသည်မှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ကိုရီးယားကားဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ကြံရန် ကြိုးစားမှု ( ဖြစ်ရပ်မှန် )